Sipenda izinwele ngemikhiqizo yemvelo
Abesifazane bathanda ukushintsha isithombe sabo. Phela, ufuna ukuhlala intombazane eyimfihlakalo. Namuhla unezinwele ezimvu obomvu, futhi kusasa usuvele usu-brunette ovuthayo futhi onomdlandla. Kodwa akuphephile ukuba bapende izinwele ngama-ammonium dyes. Izinwele ezijwayele ukudweba unomphela nokuqondisa zingacatshangwa zifile. Futhi ungakugwema kanjani lokhu? Uma uvumelekile izimali, ungathenga ngaphandle kombala wezinwele ze-ammonia, ungafunda ngabo impendulo enhle. Kodwa kukhona ithuba lokushintsha umbala wezinwele usebenzisa ama-nature amancane. Yiqiniso, lezi dessert azikwazi ukushintsha kakhulu umbala wezinwele, nakuba emva kwezinqubo ezimbalwa, umbala wezinwele uzoshintsha ngokuqondile. Ngakho-ke sizosebenzisa udayi womuntu, futhi ngeke silimaze izinwele ngezindlela zamakhemikhali.
Uhlobo luni lwama-dyes yemvelo lungadlala izinwele zakho ngemibala emnyama, futhi yiziphi ezikhanyayo? Ngaphambi kokufaka isicelo, kubalulekile ukwazi kahle ukuthi ungayisebenzisa kanjani, ngakho kamuva akukho izigameko.
Ngakho yini enhle ngemikhiqizo yembala yembala yemvelo? Kuhle kakhulu. Phela, ama-dyes angokwemvelo ngeke aphule izinwele, anaprotic, aziqinisa futhi azenze zibe nempilo. Lena inzuzo enkulu kakhulu. Amadayi anjalo athatha kabi isakhiwo sezinwele, azibheka futhi anikeze ukubonakala okunempilo. Kuhle - ngidle izinwele zami futhi ngikuqinisa ngokushesha. Iphelele. Ngakho ungashintsha umbala wakho wezinwele futhi usazoqinisa ama-hair bulbs. Iqiniso likhona elilodwa elincane - ama-dyes yemvelo ahlanzwa ngokushesha, ngakho-ke uzovame ukugqoka izinwele zakho, kodwa kuwufanele.
Ukupheka kwabantu: izinwele zemvelo toning
Abantu abaningi bafuna ukusebenzisa i-tonic yezinwele ukuze bashintshe umthunzi kancane. Futhi kungenzeka ukusebenzisa izithako zemvelo ezingeke zikulimaze. Kungenzeka ukugcina ithoni ethile yamabala angenamakhemikhali. Ngakho-ke, sizazi izindlela zokupheka eziningana.
Ukunikeza izinwele umbala obomvu omncane, kubalulekile ukusebenzisa i-husk anyanisi. Kulokhu, ama-husks athululelwa ngamanzi abilayo futhi aphikisele amahora angu-2-3. Khona-ke ukumnika ukusetshenziselwa njengesimo se-conditioner. Lokhu kuzokwenza izinwele zibe yincani elula.
Ukuze ususe izinwele ezimhlophe, uncoma i-decoction yamacembe. Ukuze wenze lokhu, i-spoonful amaqabunga athululelwa ngamanzi abilayo futhi ufune amahora ambalwa. Umhluzi kufanele ugxilwe kahle ezimpandeni zezinwele. Lokhu kususa i-hue yezinwele ezimpunga. Kuzodingeka senze njalo le nqubo njalo.
Amaqabunga ama-walnut azonikeza umthunzi we-chestnut. Ngenxa yalokhu, amaqabunga aphulwa futhi agxila kuwo. Le recipe ifaneleka kahle izinwele zezinwele. Umhluzi uzonikeza umthunzi omnandi wemvelo.
Kodwa umhluzi we-chamomile uzonikeza umbala wekolweni, kodwa kufanelekile nge-blonde. Ngoba uma ungumnikazi wezinwele ezimnyama, i-vyromashka ngeke isebenze. Umthunzi wegolide uzovela futhi ngezinwele eziboya izinwele.
Uma ugeza njalo izinwele zakho ngomhluzi we-rhubarb, khona-ke ungakwazi ukufeza umbala omuhle wensiza, ngaphezulu manje usuqaphela. Ukwenza i-grill ilula kakhulu. Kulokhu, izinkezo ezimbalwa zamakhambi zithelelwa ngamanzi abilayo futhi zifuna amahora amathathu. Kungenzeka futhi ngaphezulu.
Kudingekile ukubuza umbuzo onjalo - kungakanani impahla eluhlaza okudingekayo ekubalaleni izinwele? Konke kuncike ku-saturation. Uma ufuna umbala ube mhlophe, khona-ke udinga ukuthatha inqwaba yotshani.
Ngesizo se-conditioner, izinwele zizoshintsha umbala wazo kancane kancane. Ngakho-ke, emva kokugeza kwezinwele ezingu-1-2, bangase bangashintshi umbala wabo. Kudingeka ukuba ube nesineke. Labo abafuna ukufeza imiphumela esheshayo, ungakwazi ukubopha izinwele zakho ku-decoction bese uwufaka ithawula ngehora. Bese ugeza izinwele ngamanzi afudumele.
I-basma ne-henna bangabangane abakhulu
Ake sibone ukuthi yini eyenza i-henna ne-basma? Ngakho-ke, i-basma yenziwe i-powder emaqabunga omisiwe we-indigo sphere, edayayo, kanti i-henna yilevsky eyomile. Lezi zinhlobo ezimbili zomkhiqizo zingamadayimane adume kakhulu. Uma uwuthatha ngendlela ehlanzekile, kuyokwenza kahle izinwele zibe nombala obomvu obomvu. Uma uphazamisa ne-basma, ungafinyelela ama-shades ahlukile. Ungakwazi ukufezekisa ngisho nokushiswa komnyama. Akukho okungeke kwenzeke.
Kunconywa ukusebenzisa i-henna yamaNdiya. Kungcono futhi kungcono ukusebenzisa. Thenga lokho ongakwenza esitolo nge-orientematikoy. Iqiniso, azikho eziningi kakhulu. Ukudweba, kungcono ukukhetha i-henna yesilasi. Ngoba uma uhlanganisa i-henna engenambala ne-basma uzoba ngumnikazi wezinwele eziluhlaza okwesibhakabhaka. Ngeke kube mnandi kakhulu. Nakuba nge-Halloween uzoba nekhanda elihle kakhulu.
Manje sizokhetha ukulingana okufanele kwe-henna ne-basma. Ukufeza umbala we-chestnut, kuzodingeka uhlanganise lezi zithako ezimbili ku-1: 1 isilinganiso. Uma ufuna ukugqoka izinwele zakho ezimnyama, kuthatha izingxenye ezimbili ze-basmine 1 ingxenye ye-henna. Kodwa umbala wethusi uqinisekisiwe kuwe uma kwenzeka izingxenye ezimbili ze-henna nge-1 ingxenye ye-basma.
Ukubala izinwele zakho nge-henna ne-basma, udinga ukuthatha i-powder engaba ngu-50-100 g. Inani lixhomeke ubude bezinwele. Thela ingxube elandelwa ngamanzi ashisayo bese uvuselela izithako ngokucophelela. Kuvela ingxube eluhlaza okomile ohlaza. Kubonakala sengathi ... Kungcono ukungacabangi ngakho. I-Kashitsu kufanele isetshenziswe ezinhlanzeni ezihlanzekile nezinamanzi, usakaze "upende" kuyo yonke ubude. Ukuze ungapendeli umzimba ngepende, kubalulekile ukugoba wonke ukhilimu noma amafutha ohlangothini lokukhula kwezinwele.
Kunconywa ukuthi ungeze i-kefir encane ne-shampoo engxenyeni. Khona-ke unamathisela uzosetshenziswa kalula ezinyaweni. Lena indlela enhle yokubala. Emva kokusebenzisa ingxube, udinga ukugoqa izinwele zakho ihora. Uma ufuna umbala oboya obunwele, kubalulekile ukubamba ingxube amahora amabili. Emva kwalendlela, sigeza izinwele ngamanzi afudumele.
Tea noma ikhofi?
Ungadlala izinwele zakho ngeziphuzo zakho ezizithandayo. Ngosizo, ikhofi noma i-cocoa powder, ungakwazi ukuthola imiphumela emihle. Ukuze uthole umbala wezinwele ze-chocolate kune-iresiphi enhle.
Thatha izipuni ezingu-3. itiye elimnyama, wathululela amanzi abilayo futhi abilisiwe ngamaminithi angu-20. Etikini, kune-spoonful yekhofi kanye ne-spoonful of cocoa. Ukugcina izinwele zilula, engeza isipuni 1 kulo mxube. i-glycerin. It yenza kahle kahle.
Faka isicelo se-liquid kuya kwezinwele bese usifaka ithawula. Yibambe cishe imizuzu engama-40-50. Konke kuncike ukuthi yiziphi izinwele zombala oyifunayo. Ingxube inikeza inhlawulo emnyama yemvelo. Ithuluzi elimangalisayo okwenze ube mnyama.
Idayi yemvelo iyahlanzwa ngokushesha, ngakho imvamisa yemidwebo izanda, kodwa izinwele zakho zizohlala ziphila futhi zihle. Isibonelo, i-henna ne-basma kahle iqinisa izinwele futhi ibenze ibe buthakathaka. Ukuhlolwa okujabulisayo!
Indlela yokukhipha ama-dandruff, ama-folk remedies
Umbala on izinwele ezimnyama
Izinwele ezinomile - okufanele ukwenze
Indlela yokugqoka kahle izinwele zakho: izinto ezingu-4 okudingeka wazi!
Izitayela zezinsikazi nezinwele zezinwele - izithombe zamamodeli athandwayo
Abapheki bezinwele: imfihlo yokuphumelela
Izinwele ziwa: izimbangela nezindlela zomzabalazo
Yimiphi imishanguzo enyangeni ezintathu
Isikhathi esihle kakhulu sokuzalwa kwengane
Ama-sms amahle nge-Easter 2017
Usuku lokuthola izivakashi
Isidlo sothando: kanjani futhi kanjani
Izinkanyezi zamaShayina zezimpawu zodiacac
UDktunk Evgeny Tsyganov ufungile emiklomelo
Ukubonisana kwengqondo kwengqondo ezindabeni zomndeni
Kungani amadoda afana nobulili obukhuni?
Umshado waseHollywood ngesitayela se "Bondiana"
Imithetho 4 ebalulekile yokukhulula izinsuku: thola ukuthi unganciphisa kanjani isisindo ngokuphepha!
Ulungele ukuyeka yonke into ngothando?
Indlela yokwenza i-origami ephepheni: inhliziyo (ividiyo)
Izimfihlo ezincane zokupheka
Umyeni omuhle: u-Alexander Gordon nabo bonke abafazi bakhe (izithombe ezingavamile)
Yikuphi ukuhlinzwa kwepulasitiki eyenza u-Olga Orlova: ngaphambi nangemva kokuthatha isithombe sepulasitiki